Munaasabad lagu maamuusayay maalinta caalamiga ee dalxiiska oo lagu qabtay Muqdisho. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Munaasabad lagu maamuusayay maalinta caalamiga ee dalxiiska oo lagu qabtay Muqdisho.
Munaasabad lagu maamuusayay maalinta caalamiga ee dalxiiska oo lagu qabtay Muqdisho.
Boqolaal dhalinyaro ah xubno katirsan goleyaasha kal duwan ee dowladda Ganacsato iyo marti sharaf kala duwan ayaa kasoo qeyb-galay xaflad ballaaran oo lagu maamuusayay maalinta dalxiiska Soomaaliyeed oo lagu qabtay gudaha xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho.
Agaasimaha waaxda dalxiiska ee Wasaaradda warfaafinta Farxiyo Samaan ayaa sheegay in haatan dalxiiska dalka laga dareemayo isbeddel iyadoo sanadkii seddexaad oo xiriir ah xoogga lagu saaray sidii loo soo nooleyn lahaa daxliiska dalka.
”Waxaa hada isbeddel xooggan laga dareemayaa heerka uu gaarsiisanyahay dalxiiska dalka waana arrin seddexdii sano ee la soo dhaafay aan si isdaba joog ah aan kor ugu qaadeynay sidii aan dib ugu soo nooleyn-lahyeyn ayay tiri agaasime farxiyo.
Agaasimagaha Guud ee Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf sheekh Al-cadaala ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay munaasbaddaasi iyo waxyaabaha lagu soo bandhigayo.
“Munaasabadaan waxa ugu weyn ay caawa qusyeso waxaa ka mid ah inaan u dabaal degno maalinta dalxiiska iyo sidoo kale inaan asteyno goobaha lagu soo bandhigayo ayuu hadalkiisa ku af-xeray Agaasime Cadaala.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalene ka mid ah ganacsatada dalka maalgashiga ku sameeyay ayaa ku booriyay dadka Soomaaliyeed in amniga uu ka horreeyo maalgashiga dalka taasine lagula dagaalami karo nabad gelyo la’aanta.
“Aniga waxaa qabaa in marka hore laga shaqeeyo maalgashiga taasine aan kula dagaalami karno amni darada ka jirta dalka waana qasab inaan beddelno muqaalka dalkeena ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug Axmed shire falagle ayaa wasaaradda warfaafinta ku ammaanay soo bandhista goobaha bilicda leh ee dalka iyo sare u qaadista goobaha dalxiiska dalka.
“Anigoo ku hadlayay magaca dowlad goboleedyada dalka waxaan uga mahadcelinaynaa Wasaaradda warfaafinta sida ay bulshada Soomaaliyeed ugu jiheyneyso sidii loo soo bandhigay goobaha bilicda leh ee uu alle nagu maneystay ayuu hadalkiisa ku adkeeyay Wasiir Falagle.
Sii hayaha Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ku dhawaaqay in labo todobaadka kasto ee bishaan kale loo asteeyay maalmaha dalxiiska dalka oo maalinba goobo dalxiis la soo bandhigayo.
“Muddo 14 cesho oo ka bilaabaneyso 13 bisha iyo 27 bishaan waxaan udabaal degeynaa maalmaha dalxiiska Soomaaliyeed waxaana ugu talagalnay in maalinta walba aan soo bandhigno goobno qurux badan ayuu yiri wasiir maareeye.
Previous articleTurkiga oo dib u celiyay Markabka sahanka ah Oruc Reis.
Next articleTrump oo cafinaya sarkaal baxsad ah oo dambi ku oogay Dad soomaali ah.